HomeDharmaयस्ता व्यक्तिले भाग्यले होइन आफ्नो मेहनतले पैसा कमाउँछन्
कहिलेकाहीँ हातका रेखाहरू सीधा हुँदैनन्। तिनीहरू अगाडिबाट दुई-मुखी हुन्छन्। औंलाको स्थितिले पनि व्यक्तिको जीवनलाई असर गर्छ। हस्तरेखाशास्त्रका अनुसार यदि सूर्यको औंलाभन्दा सानो औंला धेरै सानो भयो भने व्यक्तिले जीवनमा धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्ता मानिसहरू आधा जीवन संघर्ष गरिरहन्छन्। यदि शनि पर्वतमा रहेको व्यक्तिको औंला बलियो छ भने त्यो व्यक्ति मेहनती हुन्छ । हस्तरेखा शास्त्रका अनुसार यदि बुध पर्वतमा साना र कमजोर रेखाहरू छन् भने यसले व्यक्तिलाई मेहनती बनाउँछ। शनि पर्वतमा भाग्यको प्रतीक हो।
कहिले उक्लिन्छ तपाईको भाग्य, जान्नुहोस् यसरी
यदि यो पहाडमा शुभ रेखा छैन भने, जीवनमा आफ्नो कर्मले मात्र धन कमाउँछ। यो भाग्यको अवस्था होइन। यो पहाडमा रेखा उक्लियो भने मानिसलाई धन प्राप्त हुन थाल्छ । यदि चन्द्रमा आरोहण राम्रो छ भने यसले व्यक्तिको मानसिक अवस्था राम्रो देखाउँछ। यदि व्यक्तिको हातमा भाग्य रेखा दुईमुखी भई लहरी रूपमा सर्छ भने यसले जीवनमा उतार-चढावको बीचमा सफलताको संकेत गर्छ। यस्तो व्यक्ति जीवनमा उतार चढावको बीचमा मात्र अगाडि बढ्छ।
यदि आयु रेखा अर्थात् जीवन रेखाले शुक्र पर्वतलाई बढी घेर्यो भने व्यक्ति दीर्घायु हुन्छ । यस्ता व्यक्तिहरू ८० वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेरसम्म बाँच्छन् ।
यस लेखमा दिइएको जानकारीमा, हामी यो पूर्णतया सत्य र सहि छ भनी दाबी गर्दैनौं र तिनीहरूलाई अपनाएमा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुनेछ। जुन सर्वसाधारणको हितलाई ध्यानमा राखी मात्र प्रस्तुत गरिएको हो ।)
See also राम नवमीको शुभ अवसरमा यी सुन्दर सन्देशहरू, कोट्स हरू साझेदारी गर्नुहोस्-Ram Navami Wishes
Previous articleसत्य बोल्नु, क्रोध नगर्नु, थोरै भएपनि दान गर्नु! एक पटक सबैले पढ़न्नै पर्ने
Next articleताप्लेजुङको ओलाङचुंगोला केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प Earth Quake
सत्य बोल्नु, क्रोध नगर्नु, थोरै भएपनि दान गर्नु! एक पटक सबैले पढ़न्नै पर्ने